/ Products / R & D Reagents / Cortexolone 17α-propionate powder
SKU: 19608-29-8. Category: R & D Reagents
Vane makumi manomwe nemanomwe vane chiso chavo vakawana 2-3 maererano neInvestigator's Global Assessment (IGA) yakashandurwa kuti iwane placebo cream (n = 15), kana Cortexolone 17A-propionate 1% cream (n = 30), kana tretinoin 0 · 05 % kamufa (n = 32) kamwe chete pazuva pamubhedha wevhiki dze8. Kushanda kwehutano kwakashandurwa masvondo ose e2 kusanganisira chiremera chenguva yese (TLC), kupisa kwechiremera kuverengwa (ILC), acne severity index (ASI) uye IGA. Kuchengetedzwa kwekuchengetedza kwakabatanidza nharaunda yekutsamwa kwemahara, kuongororwa kwebhakato, kuongorora kwemuviri, zviratidzo zvinokosha nekunyora kwezviitiko zvakashata.
Cortexolone 17α-proprionate, Breezula powder mu polymorphic maitiro ayo: mhuri yekutanga yepa patent, inopera muUnited States mu2022 / 23 uye mu 2022 kune dzimwe nyika, inoshandisa kushandiswa kwechiremba kwekemukari yekurapa acne, alopecia uye zvimwe zvirwere; mhuri yechipiri yepavhangeri inosanganisa maitiro ose anozivikanwa e-crystalline eAAPI, maumbirwo ane anopa API imwechete uye kushandiswa kwezvokurapa kwakabatana mukurapa mashekeri, AGA nezvimwe zvirwere: mhuri iyi yepamutemo yakatobudiswa muUnited States, Europe, Canada, Japan uye dzimwe nyika, dzichapera mu2030 muUnited States uye 2028 kune dzimwe nyika.Breezula powder
Kurapa Kwemusoro Kunobatsira Vanhu: Cortexolone 17α-propionate powder (CB-03-01)